Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Xavi Hernandez Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Barca Legend kasị mara aha na aha njirimara; “Nna-ukwu Puppet”. Anyị Xavi Hernandez Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke FC Barca na Spanish Legend Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole na-ele Xavi Hernandez Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Xavi Hernandez Akụkọ nwata - Afọ Ndị Mbụ na Ezinụlọ:
Xavier "Xavi" Hernández Creus mụrụ na 25th nke Jenụwarị, 1980 na Terrassa, Barcelona, ​​Catalonia. A mụrụ ya nne ya, Maria Mercè Creus na nna, Joaquim Hernández (onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ).
Kemgbe ọ bụ nwata, ọ na-anụ ọkụ n'obi banyere egwuregwu ahụ ma na-ele ọtụtụ egwuregwu bọọlụ bekee.
Xavi gosipụtara ikike egwuregwu dị egwu mgbe ọ dị obere. Ndị nne na nna ahụ nyeere Xavi aka ime mkpebi ndị ziri ezi n'oge dị mkpa, na-eduzi ya ịgbaso ụzọ ndụ n'ụzọ ziri ezi.
Ọ bụ ezie na ọ bụ onye mmụọ ozi na-eme egwuregwu na mbụ Pep Guardiola na Barcelona.
Xavi Hernandez Biography - Nchịkọta Ọrụ:
Xavi sonyere La Masia, ụlọ akwụkwọ mmuta nke FC Barcelona, ​​mgbe ọ dị afọ 11.
Ogologo ngwa ngwa site na ulo akwukwo ndi ozo mere ka onye midfielder nweta ebe na 1997-98 idobere otu, nke meriri nkewa ya iji nweta nkwalite.
Mgbe Xavi bụ 19, ọ fọrọ nke nta ka ọ banye Milan. Nna ya nyere ya “Ee” ya ma mama ya kwuru “Ọ bụrụ na Xavi ahapụ Barcelona m ga
ịgba alụkwaghịm! ”.
Xavi chefuru echiche ahụ wee debe ọganihu ya na Barcelona. Nnukwu ọrụ a rụpụtara pụtara na ọ ghọrọ onye bụ isi so na ndị otu mmeri Louis van Gaal.
Xavi mechara egwuregwu mbụ ya na egwuregwu 26 egwuru egwu ma merie otu asọmpi Spanish. A kpọkwara ya onye 1999 La Liga Breakthrough Player of the Year.
Xavi ghọrọ onye isi na-egwu egwuregwu Barcelona mgbe ọ merụrụ Pep Guardiola na oge 1999-2000.
Ọ nọgidere na-enwe ọganihu ma kpọọ ya La Liga Spanish Player of the Year na 2005.
Ọzọkwa, mgbe akpọchara ya Player of the Tournament na Euro 2008, Xavi gwara Bayern Munich banyere ịnyefe.
Onye nkuzi bọọlụ ọhụụ akpọpụtara Pep Guardiola kwenyesiri ike na ọ dị oke mkpa na klọb ahụ ka ahapụ ya.
Na 9 June 2010, Xavi debanyere nkwekọrịta ọhụrụ afọ anọ na ụlọ ọrụ ahụ, nke a ga-emeghachi aka ozugbo ruo 30 June 2016 dabere na ọnụ ọgụgụ egwuregwu a na-akpọ. O nwere ezigbo ezumike nká si Barcelona.
Na 21 May 2015, Xavi kwupụtara na ya ga-esonyere klọb Qatari Al Sadd na njedebe nke oge 2014-15 na nkwekọrịta afọ atọ.
Dị ka onye ọrụ ya si kwuo, azụmahịa ahụ ga-agụnye ya ịbụ onye nnọchi anya maka 2022 FIFA World Cup na mba ahụ, wee bido ntozu nkuzi ya.
Na 10 November 2017, Xavi kwuru na ya ga-ala ezumike nka na ngwụcha oge 2017-18, na ga-emesịa chụọ ọrụ nkuzi.
Xavi Hernandez Ezinụlọ:
Frombia site na ezinụlọ bọọlụ pụtara na ị bara ọgaranya. Nke a bụ n'ihi na a na-akwụ ndị ọkachamara bọọlụ ezigbo ụgwọ.
Nke a bụ ihe banyere Xavi. Ọ sitere na ezinụlọ bara ọgaranya. N'ebe a, anyị na-enye gị nkọwa gbasara ezinụlọ ya.
NME: Joaquín Hernández García, nna FC Xavi bụ onye ọkpụkpọ lara ezumike nká si Mexico.
Joaquín Hernández García malitere ọrụ ịgba bọl na Terrassa na mgbe ahụ, mgbe ọ dị afọ 18 bụ onye otu Sabadell's First Division Division.
Mgbe ya na Sabadell nọrọ, ọ na-egwuri egwu n'ọtụtụ klọb, gụnyere FC Barcelona ebe nwa ya nwoke mechara kpọọ.
Mgbe Joaquin lara ezumike nká, ọ kụziiri ọtụtụ ndị Catalan, ụfọdụ n'ime ha na Nkeji nke Atọ. A na-ahụ ya dị ka onye ndụmọdụ nye nwa ya nwoke Xavi.
Nne: Maria Mercè Creus bụ nne nne Xavi. The FC Barcelona veteran midfielder ozugbo kpughere a "Agha" ya na nne ya kwụsịrị ya ịhapụ ndị Catalan giants n'oge gara aga.
Enweela m onyinye n'oge gara aga ịhapụ, mana ọ na-ekwusi ike mgbe niile na ebe m nọ ebe a na Barcelona.
Mama m kwuru na ọ kaara m mma n'ụlọ, na m kwesịrị ịga nke ọma na Barcelona na ọtụtụ oge ọ rụsiri ọrụ ike iji hụ na m nọrọ, ọ gwara Sky Sports site na Soccer Laduma.
“Mgbe m dị afọ 18, anyị nwere ụdị 'agha' n'ụlọ m iji kwụsị m ịpụ. Mama m na-ekwusi ike mgbe niile na m ga-anọ na Barca.
“Karịsịa n’oge ihe isi ike nye mụ na klọb, dị ka mgbe anyị gara afọ anọ ma ọ bụ ise na-enweghị mmeri ihe ọ bụla.
Mgbe m ekweghị na onwe m, ekweghị m na football na m na-achọ ịgbanwe ihe niile, o siri ike.
Ma n’etiti isi ike m na nne m siri ọnwụ na m ga shOuld nọrọ na Barcelona wee nwee ihe ịga nke ọma ebe a, ihe niile bịara na njedebe. ” Onye na-akọ akụkọ ntụrụndụ ahụ kwuru.
SIBLINGS: Xavi nwere umuaka 5 nke bu; Ariadna Hernández (nwanne), Dianalaura Hernández (nwanne), Oscar Hernandez (nwanne), Alex Hernandez (nwanne) na Dianalaura Hernández (nwanne).
Xavi Hernandez Biography - Ndụ mmekọrịta:
Otu akụkọ dị n'ịntanetị na nso nso a na Peru Libero na-ekwu na ndị otu egwuregwu Barcelona na Spain Xavi Hernandez na Carles Puyol nwere otu nwa agbọghọ ahụ n'anya.
Ọ bụ odeakụkọ ejiji ejiji Nuria Cunillera. Ha abụọ lụrụ ọgụ azụ na 2012.
Nkwupụta Libero na-ekwu na ndị egwuregwu abụọ ahụ ejedebela mmekọrịta ha na ụmụ nwanyị ha nwanyị n'oge ahụ wee nwee mmasị na hottie Cunillera mgbe nke ahụ gasịrị.
O nwere ike ịbụ na Puyol maara na Cunillera nwere ike ịdọrọ na Xavi ma na-agbaso mmasị ya na nwanyị ahụ.
Ọnọdụ ahụ yiri ka ọ ga-esi ike mgbe ndị egwuregwu abụọ ahụ zutere onwe ha ma ọ fọrọ nke nta ka ha fụọ Cunillera. Obi dị m ụtọ na ihe agaghị nke ọma.
Otú ọ dị, ndị egwuregwu abụọ ahụ anọghị n'ọnọdụ kachasị mma kemgbe ihe ọjọọ ahụ mere.
Ọ bụ Xavi bụ onye mechara rịọ Nuria Cunillera ngwa ngwa n'alụmdi na nwunye. Ha abụọ mere ememe alụmdi na nwunye ha na 2013. Ọ bụ ememe nke ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ndị òtù Barca ya na-aga.
Emume a bụ nke ọtụtụ n'ime ndị otu Xavi si Barcelona gụnyere Lionel Messi, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, Jordi Alba, Victor Valdes, Javier Mascherano na Pedro Rodriguez.
Otú ọ dị, Puyol abịaghị ọrụ ahụ. Ana m eche na ị maara ihe kpatara ya. A mụrụ nwa ha nwanyị, Asia, na Jenụwarị 3, 2016.
Xavi Hernandez Biography - Ihe Mere O Ji Hapụ Barca:
Dị ka nna ya, bụ Joaquim Hernandez si kwuo, “Xavi anaghị ahapụ for aku reaụmụ: “Ọ naghị ahapụ ego.
Echere m na ọ nweghị mmasị na football n'oge afọ abụọ gara aga. E nwere ọnọdụ ndị siri ike na ụlọ mgbakwasa na dịka onye isi ụgbọ mmiri, ọ tara nnukwu ike ọgwụgwụ ”.
Onye ọkpụkpọ ahụ kwetara na nnọkọ ogbako na ọ bụ oge kwesịrị ekwesị ịhapụ. "Aghaghị m ichere ruo mgbe ihe gara nke ọma ịhapụ site n'ọnụ ụzọ buru ibu". Xavi bere ákwá mgbe o kwusịrị nke ọma.
Xavi Hernandez Biography - Ihe a ga-echeta ya:
Maka ịbụ otu n'ime ndị na-etiti oge kachasị mma n'etiti oge niile
Maka ikike ya ịchọta na iji ohere eme ihe dị ka onye na-egwu egwuregwu. Dị ka o kwuru, “Nke ahụ bụ ihe m na-eme: chọọ oghere. Kwa ụbọchị.
Ana m achọ mgbe niile. ” Ịchọta ohere, ọ ga-apụta maka onye otu ibe ya ịnata ma mezie bọl ahụ, ya na onye nchịkwa ya bụ Pep Guardiola na-etinye ya. "Enwetara m bọọlụ, enye m bọọlụ, ana m enweta bọọlụ, ana m enye bọọlụ."
Maka ọhụụ ya, ntụgharị ụzọ ziri ezi na njedebe ụwa na-eme ka ọ nwee ike ịkụzi egwu egwu mgbe ọ na-enweghị ihe onwunwe.
N'ihi na ọ bụ naanị Barca ọkpụkpọ nwere ọtụtụ trophies ukwu (25) na ọtụtụ nchịkọta nke otu (8). O merie ọtụtụ trophies (28) karịa onye ọ bụla ọzọ na Spanish na akụkọ ihe mere eme.
Anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na akụkọ Xavi na akụkọ ndụ nwata, biko kpọtụrụ Lifebogger.